I-8 × 34 I-Podcast: I-WWDC 2017 ishushu | Ndisuka mac
I-8 × 34 I-Podcast: I-WWDC 2017 ishushu
Kule veki #podcastapple siqala ngeendaba ezisandula ukukhutshwa malunga nokuba abafana baseCupertino bazokwazisa okanye babonise i-12 entsha, iMacBook, iMacBook Pro kunye neMacBook Air entsha kumlo ophambili weWWDC. Kwaye ngeli lixa uninzi lwethu lucinga ukuba uluhlu lweMacBook kufuneka lube nomnyhadala walo, iApple inokumilisela ukuba zeziphi izixhobo ezinokulungiswa kwazo ezingabalulekanga kangako ukuze zibenombhalo wayo ophambili okanye uzinike kamva ngohlobo lohlaziyo iwebhu. Nokuba kunjani, kuyamangalisa ukuba iiMacBook Airs zingena kula marhe kwaye yile nto siphikisana ngayo Kunye nezinye izihloko ezinomdla ezinxulumene nomsitho kaJuni 5 kule nombolo yepodcast 34.
Ngaphakathi kwezi ndaba zokuqala ziqala ipodcast esinokuthi siyichaze njengesandulela kwiWWDC eyahluke mpela kuleyo asiqhelileyo uApple, sinamathuba amaninzi okubona izixhobo ezithile kuyo, ezingakhange zenzeke ukusukela ngo-2013. I-podcast iyakwenza oko. unokufumana kwi umjelo wethu we-iTunes okanye kwisiteshi sethu se-YouTube:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-8 × 34 I-Podcast: I-WWDC 2017 ishushu
Isixa sezicelo ezili-10 onokukhetha kuzo $ 39. IMac 'Khetha iBundle' 2017